Uterine Fibroidsroid Izimpawu, izindlela zokwelapha nezimbangela ezingaba khona.
I-Uterine Fibroids: Izimpawu, ukwelashwa nezimbangela ezingaba khona.
Wonke umuntu wesifazane esikhathini esithile empilweni kuye kwadingeka abhekane ne i-fibroid, noma okungenani wazi othile onayo. Ama-Fibroids avame kakhulu, i isimila esivame kakhulu sethumbu lobufazi , okuthinta aze afike kuma-70% abesifazane besikhathi sokuzala, ikakhulukazi phakathi kweminyaka engama-30 kuye kwangama-50, abuya ngemuva ukuya esikhathini.
Yaziwa nangokuthi i-fibroids, i-fibroids o myoma, fibroid tumor proliferation is a Benigno enye yezingqimba zesibeletho ebizwa ngokuthi myometrium.
Yize zivame kakhulu, imbangela eqondile yama-fibroids namanje ayikacaci. Siyazi ukuthi zivame ukusabela ekuphenduleni a ukungalingani kwe-hormonal, lapho kukhiqizwa khona ama-estrogens ne-progesterone
Izimpawu ze-Uterine Fibroma
Ama-fibter we-uterine ekukhulelwe
Izimpawu a I-fibroma ye-uterine
Ama-fibroids amaningi ngokuphelele asymptomatic, futhi ukuxilongwa kwenzeka ngemuva kokuthola ithuba kwi-ultrasound. Okusho ukuthi, abesifazane abaningi bathola kuphela ukuthi bane-fibroid lapho benza i-pelvic ultrasound ukuphenya ezinye izifo noma kwi-a isimiso gynecological.
Ngakho-ke, i-fibroid yayingazange ibangele zimpawu kuze kube yileso sikhathi, futhi cishe izothula impilo yonke evundile yowesifazane, icabanga ngokuwohloka kwe-hormonal wokuya esikhathini. Le yindaba yabesifazane abangama-75% abanayo i-fibroids.
Ama-25% asele, ngakolunye uhlangothi, anezimpawu ezithile ezihlobene ne-myoma, yize zizimpawu eziphakeme ezinomthelela omncane empilweni yansuku zonke. The izimpawu ezivame kakhulu Yilezi:
Ukuzizwa usindwa esiswini
Ukuhamba kokuya esikhathini okukhulu, kwesinye isikhathi kube neziqeshana
Ubuhlungu ngesikhathi sokuya ocansini
Ukukhishwa kwezisu okuvela njalo
Ukuchama kaningi, ngenxa yokucindezelwa yisinye
Ukuqunjelwa kwangaphakathi, ngenxa yokucindezela kwe-rectosigmoid
Ukopha ngokweqile ngesikhathi sokuya esikhathini.
Ukuzizwa usinda esifundeni se-pelvic
Konke lokhu kusho ukuthi ama-fibroids kufanele aphathwe futhi avame ukususwa ngokwahlinzwa.
Ngemuva kokuxilongwa nokuchazwa kwe-fibroid ngokusebenzisa izithombe, udokotela nesiguli banquma ngokuhlangana uma kudingeka indlela ngokushesha noma uma i-fibroid ingahambisana nesikhathi esengeziwe sokuhlola ukuthi i-lesion isazoqhubeka nokukhula noma ukuthi ingakhiqiza yini izimpawu.
Ku abesifazane abangafuni ukukhulelwa njengamanje futhi ukhulise ukuhamba kokuya esikhathini, faka a i-hormone ekhulula i-intrauterine Isisombululo esihle kakhulu, ngoba sinciphisa noma siphazamisa ukuhamba kokuya esikhathini ngemuva kwezinyanga ezimbalwa.
Ukunaka: amanye ama-IUD, anjenge- ithusiazikhonjiswanga ngoba zingandisa ukuhamba kokuya esikhathini futhi iminyakazo.
Ku abesifazane abangazali, lapho i-fibroid ingathinta khona i umqondo kanye nokufakwa kombungu, inketho enconyelwe kakhulu yilona ukwelashwa kokuhlinzwa ngokususwa kwe-fibroid (myomectomy).
Singayihlukanisa Izinhlobo ezi-4 ngokwakho indawo (nezimpawu nezingozi ezilindelekile esimweni ngasinye):
Subseroso: Ingaphandle kakhulu odongeni lwesibeletho, yakha i-protuberance ngaphandle kwesibeletho. Ngoba zingaphezulu kakhulu, ama-fibroids axhasayo awadali izinhlungu eziningi futhi ngokuvamile ungaphazamisi inzalo noma ukufakwa kwemibungu. Kepha, uma bakhulu ( ezingaphezu kuka-5 cm ), kungadala ushintsho ekuqeshweni kwesibeletho nokuyekethisa ukuzala, ngaphezu kokukhiqiza umphumela omningi kwizitho eziseduzane, njenge-bladder (ukuphuthumayo kwe-urinary) kanye nesisu.
I-Pedicle: Ikhula ngokuxhuma odongeni ngesisekelo esincanyana esibizwa nge-pedicle.
I-intramural: Zitholakala odongeni lwesibeletho, zihlanekezela ukuma kwesibeletho lapho zikhulu kakhulu, zingaphezu kuka-5 cm ubukhulu, ngaphezu kokukhiqiza ama-cramps. Ezimweni lapho kunokuhlanekezela komzimba, kungenzeka ukuthi i-fibroid intramural yehlisa ithuba le sokukhulelwa.
Ozithobayo- Itholakala odongeni olungaphakathi lwesibeletho, ngaphansi nje kwe-endometrium, lapho umbungu ifakwa khona, futhi ikhula esibelethweni se-uterine. Ngokuvamile lokhu kuluhlobo lwe-fibroid okuhambisana kakhulu nokopha nokuzala.
Una myomectomy Kungenziwa ngezindlela ezahlukahlukene. Okuhlaselayo okuncane kakhulu ngokusebenzisa i i-hysteroscopy, okutholakala ku-submucosal fibroid efinyelela ku-4-5 cm ngomlomo wesibeletho futhi akukho ukusikwa okwenziwe esikhunjeni sesiguli.
Ngohlelo lwe-scalpel kagesi, sikwazile ukususa i-submucosal fibroids nge-hysteroscope uqobo. Imvamisa kwenziwa kwisibhedlela, kepha kungenziwa ngaphandle kwesizathu. Isikhathi sokusebenza sizolile futhi abesifazane abaningi ababuzwa ubuhlungu.
Nokho, i I-hysteroscopy ixazulula kuphela amacala we-submucosal fibroids enzelwe izibeletho ezincane zesibeletho, ngenxa yomkhawulo wezobuchwepheshe womgwaqo uqobo.
Njengoba imbangela ethile ye-fibroids ingakachazwa, ayikho indlela yokuvimbela ngqo ukukhula noma ukubonakala kwama-fibroids, esikubiza njengokuvimbela kokuqala nokwesibili. Ngaphandle kwalokhu, kunezinhlangano eziningi ezincwadini zezokwelapha phakathi kwama-fibroids, ukudla, nezinye izindlela zokuphila ezingakhomba indlela yokuvimbela.
Nazi ezinye amathiphu leso sithembiso sokunciphisa ingozi yakho yokuba nama-fibroids futhi lokho kuzokukwenza ube nempilo engcono futhi kukwenyuse ukuzala kwakho:
Ukuvivinya umzimbaUkushiya indlela yokuphila yokuhlala phansi kunciphisa inqubo yokuvuvukala emzimbeni wonke, kuvikela ukukhula kwezilonda ezinamaqhubu, kanye nezilonda ezibabayo.
Ukudla okunempilo: Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi abesifazane abadla inyama eningi namafutha maningi amathuba okuthi babe nama-fibroids. Abadla kakhulu izitheloInyama ethambile, imifino futhi inezinga eliphakeme lama-antioxidants avikela isibeletho kulokhu kulimala.
Ukudla okunenkomba ye-glycemic ephezulu- Amaswidi, isinkwa esimhlophe, i-pasta, amakhukhi, noshukela ocolisisiwe kubangela ukuba i-insulin ingalingani i-homeostasis yomzimba futhi ingakhuphula ubungozi be-fibroids.
Lawula ukusetshenziswa kotshwala- Kumadosi aphezulu, utshwala abulungile kunoma yisiphi isitho emzimbeni, okwandisa ingozi yokudlondlobala kwamaseli nokulimala okugcina kuholele kumathumbu anjenge-fibroids.
Vakashela njalo umtholampilo: Ngokungeziwe ekucaciseni noma yimiphi imibuzo ongaba nayo mayelana ne-fibroids noma ezinye izifo ze-gynecological. U-gynecologist uzobuye aqinisekise ukuthi wenza zonke izivivinyo ezidingekayo zokuvimbela futhi uzophenya ukopha okungajwayelekile, izinhlungu zobuhlobo, umuzwa wokuxineka, isisu noma ezinye izinkomba ezingase zihambisane ne-fibroids, ukuthola ukuxilongwa kusenesikhathi futhi kuthola ukwelashwa okungcono kakhulu.
Ukuba khona kwe-fibroid kuphela ayinabuhlobo obuqondile nokuzala lowesifazane. Ekusebenzeni, i-fibroid ingenza ukuthi ukukhulelwa kube nzima futhi umuntu wesifazane agcine esekhulile ukhulelwe ngemuva kokukhishwa kwayo. Kepha kaningi, kunzima ukusho ukuthi i-fibroid yayibhekene nokuzala kanye nokuthi owesifazane wayengeke akhulelwe nganoma iyiphi indlela, noma ngabe wayeyigcinile i-fibroid.
Ngakho-ke, ucwaningo lukhombisa ukuthi i-fibroid ibheka kuphela i-4% yamacala okuzala. Lokhu akusho ukuthi ama-96% wamacala awasho ukuthi kukhona i-fibroid, kodwa akhombisa ukuthi, ngamacala angama-96%, I-fibroma akuyona ukuphela noma isici esiyinhloko esivimbela ukukhulelwa.
I-fibroid iyaphazamisa ukuzala kuya ngeyakho usayizi y indawo.
I-Los i-fibroids ukuzithoba kwanoma isiphi isayizi futhi imicu emikhulu emikhulu ye-intramural, ngaphezu kwe-4 noma i-5 cm, yizo ezihambisana kakhulu nazo ukungazali. Imvamisa lezi zikhiqiza ukuphuma kwesisu okujwayelekile ngokuhlanekezela i-anatomy yesibeletho nokuvikela ukufakwa okufanele kwe-umbungu ku-endometrium. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kulezi zimo, empeleni kukhona isilinganiso ngaphezulu phansi sokukhulelwa, ukufakelwa kombungu kanye nokuvela kokukhulelwa.
Uma ucabanga ngakho konke lokhu, Ama-fibroids amancane we-intramural kanye ne-subsrosal fibroids abhekwa njengengasebenzi ekuzaleni. Lokhu kungenxa yokuthi azithinti i-endometrium..
I-vertigo yesimo seParoxysmal -.
Ungaziphatha Kanjani Izimpawu Zokusebenza Kwabesilisa